Kulan Garoowe oo Odorasaya Doorashada Soomaaliya ee 2020 – Radio Daljir
Juunyo 22, 2017 4:32 g 0
Warbixinta kulanka waxaa inoo haya cXakiin Xuseen Xasan, Daljir Garoowe.
Kulan ka dhacay xarunta hay’ada cilmi baarits apuntland ee PDRC waxaana kulanka qabashadiisa iska kaashaday dalada daneeeyaasha aan dawliga ahayn ee PUNSA iyo Gudiga madaxabannaan ee doorashayonka dawlada federalka oo madaxdiisii u sareysay hada ku sugan tahay garoowe .
Kulanka ooo ah mid watashi ah waxaa su,aalo lagu wediyay gudiga doorashooyinka sida ay ku dhici karto arintaas waxaana gudigu ay rajo wanaagsan ka muujiyeen in wadanka ay ka dhacdo doorasho loo dhan yahay marka la gaaro waqtigeeda .
Wasiir ku xigeenka dastuurka puntland cabdi raxaman cabdi ismaciil oo shira furay aya ka hadlay kuanka wadatashiga ah ee gudigu uuu garowe ku qabtay ahmiyada uu u lee yahay xillliga in lagu qabta garoowe isagoona sheegay inay si wanaagsan ula shaqeyn donaan gudiga doorashooyinka si ay hawsha ay halkan u yimadeen ay ugu fududaato.
Gudoomiyaha gudiga madaxa banaan ee doorashooynka dalka ayaa sheeegtay in gudigu ilaa hada ay qabteen shaqo balaaran ooo dhici horu socodka dooorooyink ah ayna ku rajaweyn yihiin inay miro dhasho ayna ka duwanaato kuwiii hore ooo caqabado ay soo foodsaareen dhameystirkooda .
Su’aalo ay weydiiyeen ka qeyb galayashii kulanka ayaa waxaa ka mid aha madaxbaanida gudiga dhanka dhaqaalaha hufnaantooda shaqad xarunta ay ku shaqeyaan hada iyo khibradooda arimaha ay ku guda jiraan iaygoona sheegay inay tageen wadamo badan oo dalka dibadiisa ah ay ka soo kororsadeen aqooon dheeraad ah oooo dhanka qabashada dooroooyinka ah .
Gudoomiyha Dalada Danayeesha an Dawliga ahayn ee PUNSAA Faysal Axmed Warsame oo ka halkay kulanka ayaa ka hadlay muhiiimada kulanka watashiga ah ee bulshada ay la qaadanayan gudiga doorashoooyinka dalku isagoona bogaadiyay shaqada gudiga ooo ay wada shaqeyn dhow ee yihiin urur bulshada sida PUNSA.
Gudiga ooo Puntland sooo gaaray laba maalin ka hor waxay la kulmeen madaxda sare ee puntland waxay ka wada hadleen arim khuseeya doorooyinka dalka wada shaqeynta gudiga heeer fedral iyo kan puntland oo hada shaqada doorashooyinka ku guda jira .
Agoonta Bossaso oo la Ciidsiinayo (dhegayso)